Rano Testosterone Decanoate mpanamboatra mpamatsy sy mpamatsy - Factory
Ny poezia decanoate testosterone dia anisan'ireo steroïda indrindra ampiasain'ny atleta sy mpandoro biriky. Ny testosterone decanoate vovoka (BAN) dia endrogen sy steroid anabolic ary testosterone ester. Ny poezia decanoate testosterone dia nodinihina ho toy ny mety ho fanabeazana malefaka mahazatra.
Rano testosteron Decanoate vovoka (5721-91-5) video
Rano Testosteron Decanoate vovoka (5721-91-5) Description
Rano Testosterone Decanoate vovoka (BAN) dia androgen sy steroid anabolic ary testosterone ester. Anisan'izany ny Sustanon, miaraka amin'ny propionate testosterone, phenylpropionate testosterone, ary testosterone isocaproate. Ny tsindry Rano Testosterone Decanoate dia nodinihina ho toy ny mety ho fanabeazana malefaka fanindroany.
Ny testosterone Decanoate vovoka dia fitsipika mifandraika amin'ny toetr'andro izay sokajiana ho steroide anabolic androgenic izay azo tsapain-tànana amin'ny urine, ny ra sy ny volony. Izy io dia mpanaraka ny androgen natoraly, testosterone miaraka amin'ny antsasaky ny androm-piainany. Mampihena ny fahafatesana sy proteinuria ao amin'ny modely lupus ny testosterone decanoate. Ny fanabeazana izay ahitana vovoka Decanoate Raoa Testosterone miaraka amin'ny etonogestrel dia nodinihina mba hampiasaina ho toy ny fihinanan-kanina malefaka. Ireo steroide anabolic, anisan'izany ny vovoantitra Decanoate Rano Testosterone, dia nampiasaina mba hampitombo ny fahatsapana ara-batana amin'ny hazakaza-tsoavaly sy atleta. Ity vokatra ity dia natao ho an'ny fikarohana sy ny fangatahana fitsarana.
Rano testosteron Decanoate vovoka (5721-91-5) Specifications
Product Name Rano testosteron Decanoate vovoka
Anarana simika 5721-91-5; UNII-IJW60LAO6S; IJW60LAO6S; 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one decanoate; CHEBI:35000
molekiolan'ny Formula C29H46O3
mitsonika Point 49-51 ° C
fampiharana Andry. Zava-manerantany mifehy, fambolena
Inona no atao hoe vovo-dronono Decanoate Rano (5721-91-5)?
Ny fitsaboana testosterone decanoate dia hormone steroida avy amin'ny androgen ary hita any amin'ny biby mampinono sy ny vertebrate hafa, ny vaksinin'ny testosterone decanoate dia nohazavaina voalohany amin'ny fitsapana amin'ny mailaka sy ny ovaires ny vehivavy, na dia kely ihany aza ny sehatra adrenal, ny testosterone decanoate dia ny hormone lahy sy ny lahy sy vavy ary ny steroid anabolic.
Ahoana ny fomba famokarana rongony testosteron Decanoate (5721-91-5) asa
Ny testosterone decanoate vovoka dia endète lava izay matetika mifandray amin'ny steroids samihafa samihafa mba hahafahan'izy ireo manome valiny tsara sy mijanona ao amin'ny rafitra vatanao mandritra ny fotoana maharitra. Ny Ester dia tsy manelingelina ny fahaiza-manao sy ny asan'ny testosterone, fa ny fahafahana miasa ihany no ahafahana manao zavatra mandritra ny fotoana maharitra. Ireo Ejipsiana lava dia mandika ny antsasaky ny fiainana an-taonany amin'ny testosterone ao amin'ny vatanao ary ny esters fohy dia midika fa ny fiainan'ny zava-mahadomelina dia hanana fiainana mavitrika fohy. Ny haingam-pandehan'ny testosterone decanoate dia navotsotra ao amin'ny vatanao dia manome antoka ny fitsaboana tsy tapaka sy miorina amin'ny hormone testosterone ary lasa mavitrika aorian'ny fampidirana iray monja.
Ity steroid ity dia manana halaviran-dava efa ela sy matevina rehefa mivoaka ao amin'ny rafitra vatanao raha oharina amin'ny testosterone cypionate izay lazaina hanome valiny mitovy. Ny ampahany tena tsara indrindra amin'ny fitsaboana testosterone dia nampidirina indray mandeha; Ny vatanao dia tsy afaka manavaka azy amin'ny fomba voajanahary izay midika fa ho tianao ny vokatra tsara amin'ny faran'ny vanim-potoanao
Rano testosteron Decanoate vovoka (5721-91-5) Dosage
Ny fitsaboana Testosterone decanoate dia ampy ihany koa ho an'ireo marary manana traikefa testosterone ambany. Raha ampiasaina amin'ny Neotest 250 ny vatanao, ny dokotera dia afaka manoro anao haka mihoatra ny dosages manomboka amin'ny 750mg ka hatramin'ny 100mg isan-kerinandro. Ny ankamaroan'ny mpampiasa malefaka 250 dia mitaky ny 500mg farafahakeliny isaky ny herinandro raha ny hafa dia miha-ambony noho izany; Izany rehetra izany dia miankina amin'ny fandeferana ny vatanao. Na izany aza, ilaina ny mitsidika ny dokotera mba hanampy anao hametraka ny dosia mety aminao. Indraindray, ireo mpampiasa zava-mahadomelina dia afaka miteraka dosage ambany ary mahatsapa fihenan-tsaka hafa izay mamporisika ny dokotera mba hampidina ny dosage lavitra.
Rano testosteron Decanoate vovoka (5721-91-5) Benifits
Ny fitsaboana testosterone decanoate dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fampiroboroboana ny fibra fiteraban-jaza toy ny testis sy ny prostates.In addition, ny testosterone decanoate dia tena ilaina amin'ny fahasalamana sy ny fahasalamana ary ny fisorohana ny osteoporose, ny testosterone decanoate dia voatandrina amin'ny ankamaroan'ny vertebrates, Na dia mitombo kely aza ny trondro amin'ny antsoina hoe 11-ketotestosterone.
Ao amin'ny vahaolana entramuscular dia mamoaka vovo-dronono ny tsiranoka entram-bolo, mihena ny fihodinan'ny menaka, ny fiorana dia matanjaka ary maharitra, afaka mitazona fotoana mandritra ny andro vitsivitsy. Ny propionateestôstône dia afaka mampiroborobo ny fivoaran'ny lahy sy ny taovam-pananahana, mampiroborobo ny proteinina sy Ny fitomboan'ny endometrioma sy ny ovaire ary ny fihazana hafanana dia ampiasaina ho an'ny testosteron, cryptorchidism, hogogonadisma lahy, aretina gynecolojika, toy ny menophagia, fibromena uterine, osteoporose uterine ary anemia mangidy.
Ny testosterone decanoate vovoka dia tena tsara ho an'ny mpampiasa TRT na HRT ary koa halefa miaraka amin'ny steroid ela kokoa toy ny deca durabolin ho an'ny fotoana fohy matetika.
Buy Testosterone Decanoate powder avy amin'ny Buyaas.com